हराएको ८ बर्ष पछि श्रीमान सम्पर्कमा दुई छोरीले प्रश्न गर्दा म र्न मनलाग्छ’ भन्थिन् सम्पर्कमा नरहनु भित्रि कारण यस्तो छ, छायो खुसियाली ! हे’र्नुहोस् (भिडियो सहित) – SUDUR MEDIA
April 21, 2021 AdminLeaveaComment on हराएको ८ बर्ष पछि श्रीमान सम्पर्कमा दुई छोरीले प्रश्न गर्दा म र्न मनलाग्छ’ भन्थिन् सम्पर्कमा नरहनु भित्रि कारण यस्तो छ, छायो खुसियाली ! हे’र्नुहोस् (भिडियो सहित)
धनकुटा सासु ससुराको घरमै बस्दा पनि छोरीहरु विरामी हुँदा पनि वास्ता नगर्ने, घरमै नबस्ने गर्ने गरेकाले आफु माइत आएर बस्न थालेको बताउँछिन् । उनीहरुले बाबा छन् भन्ने महशुष गर्न पाउन भनेर अहिले उनले श्रीमानलाई सम्पर्कमा आउन आग्रह गरेकी थिइन् । आय श्रीमान् सम्पर्कमा कारण एस्तो रहेछ। बाँकि भिडियोमा हेर्नुहोला: